Kukosha kweKuongororwa Gomarara repaZamu, 06 Kurume 2019
Kukosha kweKuongororwa Gomarara repaZamu
Chitatu 6 Kurume 2019
Amai Sihlesenkosi Mukondo Votaura Nhorowondo Yekubatwa Kwavakaitwa Gomarara Repa Zamu
Amai Sihlesenkosi Mukondo vanoti shuwiro yavo ndeyekuti hurumende ibatsire mukudzikirisra mitengo yemishonga yekurapa gomarara repazamu sezvo uri kukwira zuva nezuva. Amai Mukondo vakataura naMarvellous Mhlang-Nayhuye weStudio7 nezve nhorowondo yekubatwa kwavakaitwa gomarara repa zamu.
Gumiguru 23, 2018
Madzimai neVanhurume Vokurudzirwa Kuti Vawongororwe Gomarara Repa Zamu Pachiri neNguva
Studio7 inoenderera mberi nekuburitsa nyaya dzine chekuita nedambudziko rechirwere chegomarara repazamu iro riri kucherechedzwa pasi rose mwedzi uno waGumiguru. Mumwe mukoti anehunyanzvi hwechirwere chegomarara muzvare Respect Kufakwedeke anopa dzidziso yezve kuzviwongorora gomarara rezamu.
Amai Monica Mutsvangwa Votaura Pamusoro peMutemo Inonyevenutsa Kutengwa kweZvinhu Kunze
Hurumende nhasi yambomisa mutemo unorambidza kupinda munyika kwezvimwe zvinhu uye inoti kutanga nhasi chaiko makambani nevanhuwo zvavo vave kubvumidzwa kutenga zvinhu zvange zvichirambidzwa kupinda muno zvakaita semafuta ekubikisa nekuzora, floor nezvimwe. Nyaya ina Thomas Chiripasi.
Cancer Association of Zimbabwe Yokurudzira Veruzhinji Kuongororwe Chirwere cheGomarara
Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvegomarara pagore rega rega muZimbabwe, asi vazhinji vacho vanozoona vana chiremba chirwere ichi chakomba.
Gumiguru 22, 2018
Nyaya Ina Kiri Mudzamiri - Kukosha kweKuongororwa Gomarara repaZamu
Zimbabwe iri kubatana nedzmiwe nyika pasi rino mukucherechedza chirwere chegomarara repazamu sezvinoitwa mumwedzi waGumiguru gore roga roga. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvegomarara pagore rega rega muZimbabwe.
Vanhu Vokurudzirwa Kuvhenekwa Chirwere cheGomara repaZamu
Pasi rose rinocherechedza dambudziko rechirwere chegomarara repamazamu mumwedzi waGumiguru.
Tinokukayi kuti muteerere chirongwa chedu chemusi weChipiri paStudio7 na6 am mangwanani. Pachirongwa ichi tichange tichikurukura na Amai Junior Mavhu vesangano reCancer Association of Zimbabwe nezve chirwere chegomarara. Tibateyi pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270, ne 9885 Short Wave.
Teererayi zvirongwa zvedu paStudio 7 kubvira nhasi kusvika kupera kwevhiki apo tichange tichikupayi dzidziso yekukosha kwekuongororwa gomarara repazamu. Tichange tichitaura navana mazvikokota, vakambobatwa negomarara iri nevamwewo.